Ihe ịtụnanya 83% nke Companieslọ ọrụ kụrụ na mmebi nchekwa Cyber
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe ịtụnanya 83% nke Companieslọ ọrụ kụrụ na mmebi nchekwa Cyber
Nnyocha nyocha ọhụrụ nke Skybox Security chọpụtara na 83% nke ụlọ ọrụ nwere mmebi nke teknụzụ arụmọrụ (OT) cybersecurity n'ime ọnwa 36 gara aga. Nnyocha ahụ kpughekwara na òtù dị iche iche na-elelị ihe ize ndụ nke cyberattack, na 73% nke CIOs na CISO "nwere obi ike" òtù ha agaghị enweta mmebi iwu OT n'afọ na-abịa.
"Ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ na-adabere na OT, ọha na eze na-adabere na teknụzụ a maka ọrụ dị mkpa gụnyere ike na mmiri. N'ụzọ dị mwute, cybercriminals maara nke ọma na nchekwa akụrụngwa dị oke egwu na-esikarị ike. N'ihi ya, ndị na-eme ihe egwu kwenyere na mwakpo mgbapụta ransomware na OT nwere ike ịkwụ ụgwọ, "Skybox Security CEO na onye guzobere Gidi Cohen kwuru. "Dịka ihe ọjọọ na-eto eto na enweghị mmasị, ọgụ mgbapụta ransomware ga-aga n'ihu na-erigbu adịghị ike OT ma ọ bụrụhaala na arụghị ọrụ na-aga n'ihu."
Nchoputa ohuru a, ihe egwu cybersecurity nke teknụzụ arụ ọrụ ledara anya nke ukwuu, na-achọpụta ọgụ mgbago elu nke nchekwa OT chere ihu - nke gụnyere mgbagwoju anya netwọkụ, silos arụ ọrụ, ihe egwu ọkọnọ, yana nhọrọ mmezi adịghị ike. Ndị na-eme ihe egwu na-eji ohere nke adịghị ike OT ndị a n'ụzọ na-abụghị nanị imebi ụlọ ọrụ nke ọ bụla - kama na-eyi ahụike ọha, nchekwa, na akụ na ụba.
Isi ihe ewepụtara na ọmụmụ 2021 gụnyere:
• Ndị otu na-elelị ihe egwu dị na cyberattack Pasent iri ise na isii nke ndị niile zara ajụjụ nwere "obi siri ike" nzukọ ha agaghị enweta mmebi iwu OT n'afọ na-abịa. Ma, 83% kwukwara na ha nwere opekata mpe otu mmebi nchekwa OT n'ime ọnwa 36 gara aga. N'agbanyeghị oke mkpa nke ụlọ ọrụ ndị a, omume nchekwa na-emekarị adịghị ike ma ọ bụ adịghị adị.
• CISO kwụsịrị n'etiti nghọta na eziokwu Pasent iri asaa na atọ nke CIO na CISO nwere ntụkwasị obi siri ike na usoro nchekwa OT ha agaghị emebi n'afọ na-abịa. Tụnyere naanị 37% nke ndị na-ahụ maka ihe ọkụkụ, bụ ndị nwere ahụmịhe nke aka ha karịa nsonaazụ mwakpo. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ajụ ikwere na usoro OT ha adịghị mfe, ndị ọzọ na-ekwu na mmebi ọzọ dị n'akụkụ nkuku.
• Nrube isi enweghị nchekwa Ka ọ dị ugbu a, ụkpụrụ nnabata egosila na ezughi oke na igbochi ihe nchekwa. Ịnọgide na-erube isi na ụkpụrụ na ihe achọrọ bụ ihe kacha emetụta ndị niile zara ajụjụ. Ihe nrube isi n'usoro iwu ga-aga n'ihu na-abawanye n'iburu ọgụ na nso nso a na akụrụngwa dị oke egwu.
• Mgbagwoju anya na-abawanye ihe egwu nchekwa Pasent iri asaa na asatọ kwuru na mgbagwoju anya n'ihi teknụzụ ọtụtụ ndị na-ere ahịa bụ ihe ịma aka n'ichekwa gburugburu OT ha. Na mgbakwunye, 39% nke ndị niile zara ajụjụ kwuru na ihe mgbochi kachasị maka imeziwanye mmemme nchekwa bụ mkpebi a na-eme na ngalaba azụmahịa nke ọ bụla na-enweghị nlekọta etiti.
• A na-ahụta mkpuchi ụgwọ cyber dị ka ihe zuru oke site na ihe dị ka pasenti iri atọ na anọ nke ndị zara ajụjụ kwuru na a na-ahụta mkpuchi ụgwọ cyber dị ka ngwọta zuru oke. Agbanyeghị, mkpuchi ụgwọ cyber anaghị ekpuchi “azụmahịa furu efu” dị oke ọnụ nke sitere na mwakpo ransomware, nke bụ otu n'ime nchegbu atọ kachasị nke ndị na-aza ajụjụ nyocha.
• Ngosipụta na nyocha ụzọ bụ ihe kacha mkpa cybersecurity ụzọ Pasent iri anọ na ise nke CISO na CIO na-ekwu na enweghị ike ịme nyocha ụzọ n'ofe gburugburu ebe obibi iji ghọta n'ezie ikpughe bụ otu n'ime nchegbu nchekwa atọ ha kachasị. Ọzọkwa, CISOs na CIOs kwuru na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ofe OT na IT gburugburu (48%) na convergence nke IT teknụzụ (40%) bụ abụọ n'ime ha atọ kacha ize ndụ nchekwa.
• Silos na-arụ ọrụ na-eduga n'ịhazi oghere na mgbagwoju nkà na ụzụ CIOs, CISOs, Architects, Engineers, and Plant Managers niile na-edepụta silos arụ ọrụ n'etiti ihe ịma aka ha kachasị elu n'ichebe akụrụngwa OT. Ijikwa nchekwa OT bụ egwuregwu otu. Ọ bụrụ na ndị otu egwuregwu na-eji akwụkwọ egwuregwu dị iche iche, o yighị ka ha ga-emeri ọnụ.
• Agbụ ọkọnọ na ihe ize ndụ nke ndị ọzọ bụ nnukwu ihe iyi egwu Pasent iri anọ nke ndị zaghachirinụ kwuru na agbụ ọkọnọ / ohere ndị ọzọ na netwọk bụ otu n'ime ihe egwu nchekwa atọ kachasị elu. N'agbanyeghị nke ahụ, naanị 46% kwuru na nzukọ ha dị ka amụma ịnweta ndị ọzọ nke metụtara OT.
Ntụtu aka na-akwado
• Navistar, Inc., Onye njikwa nchekwa ozi Robert Lynch: “Ụfọdụ CISO nwere ike inwe ntụkwasị obi ụgha n'ihi na n'agbanyeghị na e mebiela ha, ha achọpụtabeghị nke a; mgbe ụfọdụ ndị hackers na-anọ ebe ahụ ogologo oge na-eguzobe ntọala ha. Ọ dị ize ndụ inwe obi ike n'ihi na ndị ajọ mmadụ mara mma. "
• Skybox Security Research Lab Threat Intelligence Lead Sivan Nir: "Ọgụgụ isi iyi egwu anyị na-egosi na adịghị ike ọhụrụ na OT gbagoro 46% karịa ọkara mbụ nke 2020. N'agbanyeghị ịrị elu nke adịghị ike na mwakpo na nso nso a, ọtụtụ ndị otu nchekwa anaghị eme nchekwa OT mkpa ụlọ ọrụ. Gịnị kpatara? Otu n'ime nchoputa a tụrụ n'anya bụ na ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa na-agọnarị na ha enweghị ike ma kweta na a dara ha. Nkwenye na akụrụngwa ha dị nchebe - n'agbanyeghị ihe akaebe megidere ya - emela ka usoro nchekwa OT ezughị oke. "
Iji mụtakwuo, budata ọmụmụ nyocha n'uju.
Ọmụmụ nyocha ahụ gụnyere nzaghachi sitere na 179 ndị na-eme mkpebi nchekwa OT na US, UK, Germany na Australia. Ọtụtụ n'ime ndị zara ya (152) sitere na ụlọ ọrụ nwere $1B ma ọ bụ karịa na ego ha nwetara n'ime ụlọ ọrụ mmepụta, ume, na ịba uru.